Shiinaha 20T warshad mashiinka barafka tuubada iyo alaab-qeybiyeyaasha | Nidaamka Barafka ee Herbin
Sawirada mashiinada barafka tuubada 10T / maalin ee aan horey u sameynay.
Nuqul ka mid ah kuwa ugu fiican uguna fiican kan ugu fiican.
Ka duwan warshadaha kale ee mashiinka barafka, nidaamyada Herbin Ice waxay u daayeen tikniyoolajiyadda saboolka ee Shiinaha ee saboolka ah 2009. Waxaan bilaabaynaa inaan baranno oo aan baarno tiknoolajiyadda barafka ee Vogt ilaa iyo 2009.
Iyada oo tartiib-tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah iyo u-horumarin, waxaan hadda ka dhigi karnaa mashiinnada barafka tuubbada leh waxqabadka ugu fiican. Mashiinada barafka tuubada waa kuwo xasilloon oo leh waqti adeeg aad u dheer. Mashiinadu waa kuwo waxtar badan oo aad awood u keydsada. Tuubooyinka barafka ee ay sameeyeen mashiinnadu waa kuwo hufan, madmadow leh oo qurux badan.
Mashiinnada ayaa leh teknolojiyadda barafka ee ugu dambeeya. Evaporators-ku waxay ku qalabaysan yihiin dareeraha heerka dareeraha, kaasoo heerka dareeraha ka dhigaya mid macquul ah. Waxay ka dhigeysaa heerkulka uumi baxa nidaamka si aad u wanaagsan xakameynta. Dhanka kale, waxaan ku darnaa qaataha dareeraha ee ka sareeyaa uumiyaha, 2 kuleyl-beddelaha hore ee meelaha loo baahan yahay, dareeraha caqliga badan, iyo wixii la mid ah.
Kombaresarada ayaa had iyo jeer ku sii shaqeyn doona xaalada ugu fiican halka qalabka kale ee mashiinka barafka tuubada ee Shiinaha ay si fudud u kharribmaan inta lagu guda jiro dhalaalista.
Thanks to tikniyoolajiyadeena sare iyo naqshadeynta nidaamka casriga ah, waxaan isticmaali karnaa kombaresarada yar yar si aan u gaarno isla awooda barafka. Taasi waxaa lala barbardhigaa mashiinnada kale ee barafka tuubbada ee Shiinaha. Iyada oo kombaresarada yar yar, mashiinadayada barafka tuubada waxay isticmaalaan koronto yar si ay u sameeyaan isla barafka.
Aynu ku xisaabino mashiinka barafka ee 10T / maalin.
Mashiinnada kale ee barafka qabow ee biyaha Shiinaha waxay isticmaalaan 105KWH koronto si ay u sameyso 1 tan oo kasta oo baraf ah.
Mashiinadayda barafka tuubbada waxay isticmaalaan 75KWH oo koronto ah oo keliya si loo sameeyo 1 tan oo kasta oo baraf ah.
Farqiga u ah sameynta 1 tan oo kasta oo tuubooyinka barafka ah waa 30KWH koronto.
Marka maalin kasta, farqiga isticmaalka korontadu waa 30x20 = 600KWH.
(105-75) x 20 x 365 x 10 = 2,190,000 KWH, taasi waa kala duwanaanshaha isticmaalka korantada 10 sano.
Haddii macaamiisha ay doortaan mishiinkeyga barafka tuubada 20T / maalin, waxay keydin doonaan 2,190,000 KW koronto 10 sano gudahood.
Haddii macaamilku doorto mishiinka kale ee mishiinka barafka ee miskiinka, wuxuu lacag badan ku bixin doonaa inuu ku bixiyo macnaha koronto ee dheeraadka ah ee aan macnaha lahayn, 2,190,000 KWH.
Immisa ayey le'eg tahay 2,190,000 KW koronto ee dalkaaga?
2,190,000 KWH oo koronto ah waxay ku dhowdahay US $ 300,000 Shiinaha.
80% waxyaabaha kujira mashiinada barafka tuubada waa magac caalami ah oo caan ah Sida Bitzer, GEA Bock, Danfoss, Schneider, iyo wixii la mid ah.
Taasi waxay kuu damaanad qaadeysaa mashiinno baraf ah oo tayo wanaagsan leh oo leh waxqabadka ugu fiican.
4. Waqtiga dhalmada degdega ah.
Waxaan u baahan nahay wax ka badan 20 maalmood si aan u sameyno hal ama dhowr 3T / maalin, 5T / maalin, 10T / maalin mashiinno baraf ah.
Waxaan u baahan nahay wax ka badan 30 maalmood si aan u sameyno mid ama dhowr 20T / maalin, 30T / maalin mashiinno baraf ah.
Macaamiilku sugi maayo waqti dheer inuu soo helo mashiinnada barafka tuubbada kadib bixinta.
Hore: 10T Mashiinka barafka